Okpar Reviews, Rating & Opinions | ADD-REVIEWS.COM
Read okpar reviews, rating & opinions:
Check all okpar reviews below or publish your opinion.
OKPar [App] 2021-2-25 21:46
How to invite friend? Can't send invitation link. Where is invitation code? Stupideworst application
Product of Burmese Army(Thieves of Myanmar). Never use it. Collecting your private information.
Profileခြိနျးမရဘူးပွနျပွနျထှကျသှားတယျ Android device9ပါ
Add your opinion on okpar or scroll down to read more reviews ↓
အဆငျပွတေယျ မသိတာရှိရငျလဲ သခြောရှငျးပွတယျ
ထိုငျးဆငျမျကဒျနဲ့ငှလှေဲနိုငျရနျ အဆငျ့မွငျ့ရနျထိုငျးမှနာမညျကွီးဘဏျနှငျ့ငှလှေဲနိုငျရနျ အဆငျ့မွငျတငျပေးပါရနျ ။ထိုငျးဖုနျးဘပေါလှဲနိုငျရနျအဆငျ့မွငျ့ရနျ
ရှေ့ဆက် ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေဗျာ 🥰🥰😊
ကြိုက် တယ် ...
အရမ်းကောင်းပါတယ် wechatပုံစံမျိုး😊😊 ဒါပင် မဲ့sms codeပို့တာ နှေးတယ် facebook accountနဲ့ချိတ် လို့ရ အောင် လုပ် ပေးပါ
သုံးရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး post အသစ်တွေ ထပ်ယူလို့မရဘူး
အောငျမွငျပါစေ Unicodeရရငျ ကောငျးမယျ
Myanmar apk apk😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁⚒😁😁😁😁😁
Simple to use, feel secure chat conversation.
အကုန်အဆင်ပြေတယ် Font တွေ Auto Convert ရရင် ပိုအဆင်ပြေမယ် အောင်မြင်ပါစေ😘😘😘
Poor application dont download
ဂငျြး application ပါ ဘာမှမပေးဘူး
မြန် မာ စာ Unicode,Zawgyi ထည့်ပေးဖို့အကြံပြုပါတယ် ။
မြန်မာဘာသာစကား ထည့်ပေးတဲ့အတွက်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Bug Fix လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မကျေနပ်ပါဘူး။ ခုချိန်ထိ Contact Us နှိပ်မရသေးပါဘူး။ 1 Star ပဲပေးပါအုံးမယ်။
အသုံးပြုရတာ ရိုးရှင်း လွယ်ကူပြီး Notice မှာ File တွေပါ ပို့လို့ ရလို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ------------------------------------- အသုံးပွုရတာ ရိုးရှငျး လှယျကူပွီး Notice မှာ File တှပေါ ပို့လို့ ရလို့ အရမျးအဆငျပွပေါတယျ။
အရမ်းကောင်းပါတယ် language မှာ မြန်မာ Unicode နဲ့ Zawgyi နှစ်မျိုးစလုံး ရွေးချယ်လို့ရအောင် ထည့်ပေးမယ်ဆို အရမ်းကိုကောင်းမှာပါ။
အားပေးနေတယ် အကိုတို့ မြန်မာကိုယ်ပိုင် သုံးရတာ ပိုအားရတယ်
Unicode font need
Thanks for your rewards..
how to obtain fresh passward. Forgot passward?
Giodgame myanmar. Thank you
React buttomလေးတွေတော့ ပြောင်းပေးသင့်ပါတယ် အားလုံးနီးပါးက facebook နဲ့ တူနေလို့ 😅😅 please
samsung s4 မှာ ဖွင့်မရဘူး
သုံးရတာအဆငျပွတေယျ။point systemကမလိုပါဘူး Active status ကိုပွစခေငျြတယျ viberတို့လို လိုငျးပျေါရှိမရှိပွလို့ရသလို ပိတျထားလို့လညျးရတယျ အဲ့လိုမြိုးဖွဈစခေငျြတယျ ဒါမှ ပိုပွီးအသုံးတညျ့လာမှာဖွဈပါတယျ အကွံပွုပါရစေ
သုံးနပေါတယျ အဆငျပွပေါတယျ 😍
ကိုယ်ပိုင် ဆိုရှယ် ရှိတာကောင်းပါတယ် ပိုပြီး တိုးတက်အောင်လုပ်ပြီး ရှေ့ဆက်ပါ
မွနျမာ application ပဲသုံးမှာ
This isatruly awesome app. Allows you to make pages, read news, feeds and chat, voice video call, file transfer..all that you can possibly ask for. Two thumbs up!
Worst app.Why did you take my money??I'm really disappointed about that 😤
ယူနီကုတျဖတျလို့မရပါ။ No particular reason to use it particularly from Fb or any social platform. All characters are zawgyi fonts and cannot read.
အကြီးကြီးမမျော်လင့်ထားပေမဲ့လုပ်ပေးလို့ရရဲ့သားနဲ့မလုပ်ပေးတာတော်တော် Facebook တခုလုံးကိုတောင်copy ဃူထါးပိပိပဲ Myanmar Social Network ဆိုပိတော့ဒါလေးတွေမထည့်ပေးတာတော်တော်ဆိုတဃ် Facebook ကိုcopy ဃူတဃ်ဆိုတာပုံစံပဲဃူတာပါ အတွင်းပိုင်း ဘာမှမဆိုင်ဘူးSetting ထဲဝင်ကြည့်လိုက် Privacy မှာဘာမှမပါဘူးlanguageမှာ မြန်မာတော့ထည့်ပေးသင့်တဃ်နောက်ပိUser Agreement မှာ မြန်မာလိုတော့ထည့်ပေးသင့်တာပေါ့ Eng/MM ဆိုပိတော့ အခုလုပ်နေတာMyanmar Social Network မဟုတ်ဘူးလား ပြောချင်တာတွေကများကြီးword pyLinkမရbuPageVideoUploadမှာnotifBar
Nice, hold it up...
I like this Application . .........
best social application in Myanmar
အကောငျ့တောငျမဖှငျ့ရသေးဘူး၊ Storage permission က ဘာအတှကျတောငျးတာလဲ။ တဈခုခုတငျမယျဆိုတော့မှ permission တောငျးလို့မရဘူးလား။
ဂငျြး Application ဆုလညျးတကယျမပေးဘူး
Tags: okpar reviews okpar opinions okpar rating okpar feedback